Multi-Ọnụma nke oge a Agha mbanye anataghị ikike ats Ndị aghụghọ, Aimbot, ESP, Wallhack - Gamepron
Otutu Iwe Oku nke Ọrụ: Hack War War Modern
Na Multi-Ọnụma Modern Warfare mbanye anataghị ikike, ọ dịghị ụzọ ị ga-atụfu!
N'ezie, a ga - enwe ndị sava juputara na "ọsụsọ" ndị na-agaghị ahụ ihe ọ bụla karịa iwepụ gị. Mgbe inwetara ohere ịbanye na mwepu ọtụtụ agha nke oge a, ọ nweghị ihe ha chọrọ - ngwa ọrụ ga-atụfu ha ngwa ngwa.
Oku nke Ọrụ: Modern Warfare Multi-Rage Hack Information
Accesszụta ohere ịkpọ oku ọrụ anyị: Mpụ ọtụtụ agha nke oge a taa! Nwere ike ịhọrọ ịnweta ma ọ bụrụhaala na ịchọrọ, naanị cheta na Virtualization a na-enyere bụ ihe achọrọ iji nke oge a War Hack (ọ bụghị ndị CPU niile na-akwado Virtualization). Ọ bụrụ n ’ịchọrọ inweta Fps kachasị elu ga - ekwe omume mgbe ị na - egwu egwu, jiri Modern Warfare Multi-Rage Hack ga - abụ nzọ kachasị mma gị! Ọ bụrụ na ị nwere kọmpụta na-adịghị ike nke na-agaghị agba ọsọ egwuregwu ahụ nke ọma, ị ka nwere ike mbanye anataghị ikike - ihe niile ị chọrọ bụ Gamepron!
Nwere ike iji ọtụtụ atụmatụ ị ga - ahụ na Modern Warfare Hacks, dị ka Modern Warfare Aimbot na Wallhack. Enemy ESP na Enemy Info dị, yana Bone Prioritization na Ebumnuche Nhọrọ maka MW Aimbot anyị! Nweta ịdị ukwuu na Gamepron.
Banyere Oku nke Ọrụ: Multi-Rage Warfare Modern
Ọ bụ ezie na ị gaghị achọpụta ndapụta na Fps gị, nke a ka bụ ngosipụta nke oge a na-agba ọsọ; The Aimbot ga - enyere gị aka imeri ọgụ ọgụ ma ị nwere ike iji atụmatụ Distance iji zube ndị iro n'ime oke dị anya. Ebumnuche gị ga-adị larịị ma ndị ọzọ agaghị enwe mmetụta ka ịghọ aghụghọ ule gị, ndị egwuregwu ndị ọzọ ga-eche na ị bụ chi na egwuregwu ahụ wee daba n'ọnọdụ ha. Nwere ike iji onye njikwa na ngwá ọrụ a rụọ ọrụ, ihe niile ị ga - eme bụ ịchọta ngwa ọrụ na - ewepụ ma hapụ onye njikwa ahụ. Anyị nwere atụmatụ niile chọrọ iji merie n'agha nke oge a!
Gini kpatara iji Oku oru: otutu agha nke oge a karia ndi ozo?
Nwere ike ịsị na ndị na-eweta mbanye anataghị ikike ndị ọzọ na-etinyekarị ndị ahịa ahụ? Imirikiti oge, anyị na-achọpụta na ndị asọmpi anyị enweghị ike ịnapụta ụdị ụdị dị na Gamepron - ọ ga-abụrịrị ihe na-eme anyị onye na-achọ mbanye anataghị ikike na weebụ! Anyị niile Modern Warfare Hacks-apụghị deere na agaghị kpachara anya mgbochi-aghọ aghụghọ usoro gụnyere n'ime Oku ọrụ: Modern Warfare, otú ị ga-enwe nsogbu banyere ịlụ machibidoro iji anyị Oge a na Hacks. Ingkwụ ụgwọ ọnụahịa dị elu kwesịrị ịpụta mgbe niile na ị na-enweta ọrụ kacha mma enwere ike, nke ahụ bụ ihe anyị na-enye.
Nwere ike ịbụ isi nke egwuregwu nke gị, ebe ọ bụ na iji menu egwuregwu anyị ga-enye gị ohere ịnweta ntọala niile nke oku anyị nke ọrụ: Oge a na mbanye anataghị ikike. Nwere ike ịhazi ntọala ma nwee mmetụta maka ihe kachasị masị gị, ebe ị na-achọghị naanị ịrapara na “ntọala ngwaahịa” anyị nyere gị! Aimbot Speed ​​na Bone Prioritization bụ naanị abụọ n'ime ntọala ndị a na-ahụkarị ị ga-enwe ike igbanwe, mana nhọrọ ndị ahụ yiri ka enweghị njedebe mgbe ọ bịara na nchịkọta egwuregwu anyị. Ọ dịghị mkpa ka anyị mechie egwuregwu ọzọ na ịtụnanya anyị Warfare Hack!
Uda ndi na-emegide gi site na ighota ha anyi otutu agha nke oge a! Jiri nhọrọ ESP iji chọta ebe ihe mgbawa (na ndị iro) na-ezo na map niile, na-enye gị ohere ịchụpụ ha ngwa ngwa.
Egwuregwu na GamePron ma zipụ ndị na-emegide gị na iwe!
Njikere Na-achị na anyị koodu CW MW Multi-Ọnụma mbanye anataghị ikike?